Abaxhasi - BullyingCanada
udinga ukwesekwa kwakho Sekela Umsebenzi Wethu Obalulekile Ukupha Kwakho Kusindisa Izimpilo Ahileleke Ungasiza BullyingCanada uthembele kwabaphanayo
BullyingCanada sibonga lezi zinhlangano eziphana ngendlela emangalisayo ngokusekelwa kwazo okunombono nozwela.
Siyabonga kubanikeli abaphanayo abalandelayo ngokuseseka kwabo okuvelele BullyingCanada.
Ukwesekwa ngokwezimali nokwenyama okunikezwa yilezi zinhlangano kudlala indima enkulu ekusivumeleni ukuba siphendule amakhulu ezinkulungwane zezingcingo zosizo esizithola minyaka yonke ezivela entsheni exhashazwayo nakubantu abadala ababakhathalelayo.
Uma ungathanda ukufunda indlela yokusekela BullyingCanada-kungaba ngokwakho noma njengenhlangano-sikumema ukuthi usithinte noma uhlole ikhasi lethu lokubandakanyeka.
Abasekeli Bethu Ababalulekile
Lezi zinkampani zinikeza ukwesekwa okubalulekile ngokunikela ngemikhiqizo namasevisi ku BullyingCanada.
I-Webbhosting ihlinzekwa ngu Kualo.
Kunamawebhusayithi axhunywe noma asuka kule sayithi asetshenziswa noma adalwe yizinhlangano, izinkampani, noma abantu abangahlangene nayo. BullyingCanada. Lezi zinhlangano, izinkampani, noma abantu yibona kuphela abanesibopho sokusebenza kanye nolwazi (okuhlanganisa nelungelo lokubonisa ulwazi olunjalo) olutholakala kumawebhusayithi abo. Ukuxhumanisa noma ukusuka kule sayithi akusho ukuthi ingxenye ye BullyingCanada noma yikuphi ukugunyazwa noma isiqinisekiso sanoma yiziphi izinhlangano noma ulwazi (okuhlanganisa nelungelo lokubonisa lolo lwazi) olutholakala kumawebhusayithi azo.
BullyingCanada ayicabangi futhi ayinasibopho sanoma yisiphi isikweletu ngokuxhunyaniswa kwanoma yimaphi amawebhusayithi axhunyiwe, ukusetshenziswa kwamasayithi axhumene ukuthumela noma ukwabelana ngokuqukethwe, ukusebenza noma okuqukethwe (okuhlanganisa nelungelo lokubonisa ulwazi olunjalo) lwanoma yikuphi amawebhusayithi axhunyiwe, noma yiluphi ulwazi, incazelo, imibono noma imibono evezwa kunoma imaphi amawebhusayithi axhunyiwe. Noma yikuphi ukuphawula noma imibuzo ephathelene namawebhusayithi axhunyiwe kufanele iqondiswe enhlanganweni ethile lapho iwebhusayithi ethile isetshenziswa khona.
Uma usuhamba BullyingCanadaiwebhusayithi, BullyingCanadaInqubomgomo yobumfihlo ayisasebenzi.
Ezinye Izindlela Zokusekela BullyingCanada
Ngaphezu kokupha ku-inthanethi, kunezindlela ezimbalwa zokusekela umsebenzi wethu osindisa ukuphila.
Siyabonga abasekeli bethu ababalulekile, abaphanayo!
Ubambiswano lwebhizinisi lungazuzisa kokubili BullyingCanada kanye nebhizinisi lakho!
Izipho ezinkulu zinika amandla BullyingCanada ukwenza okwengeziwe!
Izimoto ezingafunwa ziphenduka zibe ukwesekwa okuphanayo!
Shiya ifa elikhumbulekayo futhi usekele intsha ezizukulwaneni ngezizukulwane!